Sawirro qurux badan: Qalbi Dhagax oo si xarago leh uga dhoofay Addis Ababa - Caasimada Online
Home Warar Sawirro qurux badan: Qalbi Dhagax oo si xarago leh uga dhoofay Addis...
Sawirro qurux badan: Qalbi Dhagax oo si xarago leh uga dhoofay Addis Ababa
Addis Ababa (Caasimada Online) – Sida aan wararkeena hore ku sheegnay waxaa goordhow garoonka Bole ee magaalada Addis ababa ka dhoofay Sarkaalka ONLF Cabdikariin Sheekh Muuse (Qalbi-Dhagax).
Cabdikariin Sheekh Muuse (Qalbi-Dhagax), ayaa waxaa magaalada Addis ababa ee Xarunta dalka Ethiopia kala dhoofay qaar kamid ah Eheladiisa iyo xubno kaalin ku lahaan deysmadiisa.
Qalbi-Dhagax,ayaa waxaa wehlinaayay ku dhawaad lix xubnoo oo Seddex kamid ah ay ahaayen Ganacsato gacan ka geystay deesmadiisa, waxa uuna kusii jeeda magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Markii Xabsiga laga siidaayey Qalbi Dhagax ayaa waxaa soo baxayay warar sheegayaa in uu magangalyo ka helay dowladda Kenya,waxaana haatan magaalada ay degan tahay Soomaalida ee Islii ka socda diyaar garoowgii u dambeeyey ee soo dhaweyntiisa.
Gaari cod baahiye ku xiran yahay oo uu sawir Qalbi Dhagax ku dhegan yahay oo dhex wareegaya xaafada Islii ayaa dadweynaha ugu baaqaya inay isugu soo baxaan soo dhaweynta Qalbi Dhagax.
Warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in Qlabi Dhagax uu la ahdli doono dadka isu diyaarinaya soo dhaweyntiisa, isagoo faahfaahin doona qabashadiisii, sida loo sii daayay iyo waxa uqorsheysan maadaama dib uu uhelay Xoriyadiisa.